हिन्दुशास्त्रका अनुसार पानको पातलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ, किन ? – live 60media
हिन्दुशास्त्रका अनुसार पानको पातलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ, किन ?
१)मंगलबार वा शनिबार भगवान हनुमानलाई पानको बिडा चढाउँदा लामो समयसम्म रोकिएका काम बन्ने गर्दछन्। बिडा चढाउनुको तात्पर्य हनुमानले आफ्नो बिडा उठाउन भन्ने हो। ध्यान दिनुहोस् उक्त पानमा खयर, सौंफ, गुलकंद र नरिवल राख्नुहोस्। पानमा सुना वा सुपारी राख्ने गल्ती नगर्नुहोस्।२)यदी तपाईको कुनै काम लामो समयदेखि अड्किएको छ लाखौँ प्रयास गर्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन भने आइतबार त्यो काम गर्न निस्किनुहोस्।
घरबाट निस्किदा पानको पात आफ्नो खल्तीमा राख्नुहोस्। यसो गर्नु शुभ मानिने गरिन्छ। यो उपायले तपाईको काम बन्ने गर्दछ।३) पानमा लड्डु राखेर गणेश भगवानलाई अर्पित गर्दा जीवनको सार कष्ट हट्ने गर्दछ। यस बाहेक पानको पातलाई घरको द्वारमा लगाउँदा पनि घरमा नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने विश्वास छ। घरमा राखेको पातको पातलाई हरेक दिन परिवर्तन गर्नु पर्दछ।
४)घरमा कसैको नजर लागेको छ भने पानको पातमा गुलाव पत्ता राखेर उसलाई खुवाउनुहोस्। यसो गर्दा नजर दोष समाप्त हुने गर्दछ।५) यदी तपाईको व्यापारमा कारोबार ठप्प भएको छ भने पानको पातको दान गर्दा सबै समस्या हट्नेछ। यस उपाय बुधबार अप्नाउदा शुभ मानिन्छ।
यो पनि :हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउनुहोस् हुनेछ यस्ता फाइदाहरु :यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्।यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ।
पानी बनाउने विधि.एक गिलास हल्का तातो पानीमा एक तिहाई बिरे नुन मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई प्लास्टिकको ढंक्कनले ढाकिदिनुहोस्।त्यसपछि गिलासको नुन घोल्नका लागि ३४ घण्टाका लागि छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि बिरेनुनको टुक्रा पानीमा घोलियो की खोलिएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि फेरि बिरे नुन थोरै मिलाएर त्यो पानी पिउनुहोस्।
यस्ता छन् फाइदा:पाचन प्रणालीमा सुधार.बिरे नुनको पानीले मुखमा आएको लारवाला ग्रन्थिलाई सक्रिय रहन मद्दत गर्दछ। राम्रो पाचनका लागि यो पहिलो कदम निकै जरुरी हुन्छ।पेटभित्र प्राकृतिक नुन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र प्रोटीन पचाउने इंजाइमलाई उत्तेजित गर्नमा सहयोग गर्दछ। यसले खाएको खानालाई आरामले पचाउन सहयोग गर्दछ।
तौल घटाउन मद्दत गर्छ. कालो नुनले तौल घटाउन पनि मद्धत गर्छ । शरीरमा पाचन प्रक्रिया ठीक हुन्छ भने खानामा भएको पोषक तत्व शरीरले राम्ररी लिन पाउछ ।स्वादिलो हुने भएकाले यो नुन निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।त्यसका लागि एक गिलास पानीमा एउटा कागती निचोरेर हाल्ने र स्वाद अनुसारको नुन मिसाउन सकिन्छ । गर्मीका बेला तिर्खा लाग्दा दिनको तीन चारपटक बिरे नुन खान सकिन्छ ।
मधुमेहमा उपयोगी.बिरे नुनमा सोडियम कम हुन्छ । यसले ब्लड सुगरलाई नियन्त्रित गर्छ । यसैले मधुमेहका बिरामीका लागि कालो नुन उपयोगी हुन्छ । मधुमेह सुरुवाती अवस्थामा छ भने त बिरे नुनको प्रयोगले ठीक पनि हुन सक्छ ।
जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्दा.मांसपेशी र जोर्नी दुख्दा बीरे नुनले सेक्ने हो भने निको हुन्छ । कपडामा थोरै नुन बाँधेर यसलाई तातो बनाएर दुखेको ठाउँमा दिनको दुईपटक सेक्ने हो भने तत्काल राहत मिल्छ ।त्वचाको समस्या हटाउछ.बिरे नुनमा पाइने क्रिमियमले सफा र कोमल त्वचा बनाउन सहयोग गर्दछ। यस बारेक बिरे नुनको पानी पिउदा छालाका विभिन्न समस्या हट्ने गर्दछन्।
← भगवान शिवको नियमित पूजाले मात्रै पनि घरको बास्तु दोष हटाउँछ, यसरी गर्नुहोस् पूजा
निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेवको यसरी भएको थियो उत्पत्ति →